Qubanaha » Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay Safiirka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya (Sawiro)
Madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta la kulmay safiirka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya Stephen Schwartz iyagoo ka wadahadlay taageerada Maraykanka ee dhinacyada amniga,mushaarka ciidamada iyo arrimaha abaaraha.
Kulankan ayaa Madaxweyne Farmaajo waxa uu ugaga mahadceliyay dowlada Maraykanka taageerada ay marwalba la garab taagan tahay dalka Soomaaliya.
Waxa uu Madaxweyne Farmaajo sidoo kale kala hadlay safiirka Maraykanka sidii ay u joogteyn lahaayeen taageerada ay siiyaan ciidamada dalka Soomaaliya ayna ka caawiyaan arrimaha bixinta mushaaraadka ciidanka iyo tababaridaba.
Safiirka dowlada Maraykanka u fadhiya Soomaaliya ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay kulanka uu maanta la yeeshay Madaxweyne Farmaajo,isagoo xusay in dowlada Maraykanka ay ka caawin doonto dowlada Soomaaliya arrimaha amniga iyo ciidamadaba.
Ugu dambeyntii Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Soomaaliya Stephen Schwartz ayaa guddoonsiiyay Madaxweyne Farmaajo koofi ay ku qoran tahay halkudheg la mid ah tii ku galay ololaha doorashada Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump “Make Somalia Great Again.” Oo ah “Soomaaliya waxay markale noqonaysaa mid Weyn.”
Kulankan ayaa waxa uu dhacay maalin kadib marka uu xilka la wareegay Madaxweyne Farmaajo waxana uu si xoog leh ugu tirtirsiiyay safiirka Maraykanka inay ka caawiyaan dowladiisa arrimaha dhaqaalaha ku baxa ciidamada dowlada.
Ciidamada dowlada ayaa si weyn u soo dhoweeyay doorashada Madaxweyne Farmaajo waxana daqiiqado kadib markii la doortay dhammaan gobolada dalka Soomaaliya ay si isku mid ah u taageereen ciidamada dowlada Madaxweyne Farmaajo.